Boqolaal qaxootiga Rohingya oo ka cabsi qaba dhibaatooyinka lo... | Universal Somali TV
Boqolaal qaxootiga Rohingya oo ka cabsi qaba dhibaatooyinka loo gaysto oo u qaxaya Bangladesh
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in boqolaal qof oo qaxooti ah oo ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee qowmiyadda rohingya ee dalka myanmar ay u carareen dhanka dalka deriska ah ee bangladesh iyagoo ka cabsi qabaan rabshadaha, jirdilka, iyo kufsiga loo gaysto.
Dadka magangelyo doonka ah ee u tallaabay dalka dariska ah ee Bangladesh ayaa haatan lagu qiyaasaa 600,000 oo Rohingya ah , qaar badan oo ka mid ah waxay ku celiyeen sheekooyinka kufsiga iyo dilka iyaga ka dhanka ah.
Sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobey ayaa sheegay in ciidamada Myanmar ay dileen kufsadeen oo jirdilaan haweenka muslimiinta ee Rohingya.
Ergeyga u qaabilsan ka hortaga xaaladaha rabshadaha galmada ee iskahorimaadyada ayaa la hadlaysay qaar ka mid ah qaxootiga. Waxayna sheegtay in ay sii wadi doonto inay ka hadasho tacadiyada Rohingya oo ay dacwad u gudbiso Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada, iyadoo ku baaqday kufsiga hub xasuuq ah.
Kan-xigaFilibiin: Dibad-baxayaasha ku sugan c...
Kan-horeTurkiga oo beenisay qorshe ay ku doon...
45,934,573 unique visits